Hogaamiyaasha Falastiin oo Cambaareeyay Maraykanka – The Voice of Northeastern Kenya
Hogaamiyaasha Falastiin oo Cambaareeyay Maraykanka
Madaxda wadanka Falastiin ayaa si adag u dhaleeceeyay Mareykanka oo joojiyay dhammaan dhaqaalihii uu siin jiray hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan qaxootiga Falastiyiniinta.
Warbixin qoraal ah oo ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu hakinayo lacagta uu ugu deeqo hay’addaasi Qaramada Midoobey ee qaxootiga Falastiyiniinta ee UNRWA.
Afhayeenka waaxda arrimaha dibada Maraykanka Heather Nauert ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Trump uu qiimeyn ku sameeyay hay’addani isla markaana uu go’aansaday in lacag dheeraad ah aan loogu deeqin qaxootiga Falastiin.
Bishii Janaayo ee sanadkan ayaa Mareykanka waxa uu shaaciyay in uu xayirayo in kabadan kala bar dhaqaalaha uu siin jiray hay’addaasi.
Hay’adda UNRWA ayaa hadda taageerta in kabadan shan milyan oo qof oo ku nool guud ahaan gobolka bariga dhexe, waxa ayna gacan ka geysataa caafimaadka, waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada Falastiin.
Mareykanka ayaa boqolkiiba soddon bixiya kharashka hay’addani ay ku hawlgasho, waxaana sanadkii 2016-kii uu siiyay kharash gaaraya 368 milyan oo doolar.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa sheegay in dalkiisa uu kordhin doono lacagaha deeqda ee uu siiyo hay’addani maadaama ay dhaqaale xumo soo wajaheyso.
Waxaa Qoray: Abdullahi Ahmed Abdullahi
Web Master: Mohamed Issa Hussein
Rayigaaga Hoos inoogu soo qor
← Muaran ka Taagan Dilkii loo Gaystay Hogaamiyaha Falaagada ee Bariga Dalka Ukrain
Dhageyso:- Waxgaradka, Ganacsatada Soomaalida oo kulan ku Yeeshay Magaalada Johanneesburg →